Kitra - "Champions league" :: Tafita amin’ny fihodinana faharoa ny AS Adema • AoRaha
Kitra – « Champions league » Tafita amin’ny fihodinana faharoa ny AS Adema
Ekipa voalohany tafita amin’ny fihodinana faharoan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Mada- gasikara taranja baolina kitra na ny “THB Champions League”, tany amin’ny toeram-pifaninanan’i Toamasina, ny AS Adema. Nisaraka ady sahala samy tsy nitoko tamin’ny AS Jet Mada avy any Itasy no nahatonga azy ireo ho afaka hiatrika ny dingana manaraka. Na izany aza, voatery nilalao sivy ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara tamin’ny fizaràm-potoana faharoa satria nahazo karatra mena i Tsiry (15’) sy Jonah (44’).
Talohan’ny lalao dia nisy ny teny somary nanaitra nataon’ny mpitsara fahaefatra tamin’ny mpiara-mitantana eo anivon’ny AS Adema, noho ny efa fisian’ny endrika tsy fifankahazoana tamin’ izy ireo tamin’ity fifaninanam- pirenena ity. Teo amin’ny fotoam-pialan-tsasatra no nametraka fitarainana momba an’io rahom-bava nihatra tamin’izy ireo io ny kapitenin’ny AS Adema.
Tamin’ireo lalao telo natrehan’ny AS Adema dia inefatra namoaka karatra mena ny mpitsara an’ity lalao ity. Tsy mampiova ny fiatrehanay ny dingana manaraka intsony kosa ny lalao hihaonan’izy ireo amin’ny Club M avy any Analanjirofo, rahampitso. “Na izany aza dia hampi- seho ny maha izahay anay izahay amin’io”, hoy i Jonah, kapitenin’ny AS Adema, na dia tsy isan’ireo afaka milalao aza izy.
Ora vitsy talohan’ny lalao ho an’ny andro fahaefatra eo amin’ity fifaninanam-pirenen’ny baolina kitra ity kosa no nivoaka tampoka ny fanapahan-kevitra avy tamin’ny komity ho an’ny famerenana amin’ny laoniny ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, fa ovana ny kianja hilalaovana tany Toamasina. “Tsy azo ilalaovana ny kianja monisipalin’iToamasina noho ny fisian’ny rano teny ambony kianja. Nafindra eny amin’ny kianjan’ny Genie Militaire ny lalao”, hoy ny fanambaràna nataon’i Benony Jacques, solontenan’ny komity. Mety mbola hisy fiovana indray ny kianja amin’ny andro farany, raha ny toetr’andro, izay miteraka orana hatrany eto Toamasina. Ny kianjan’ny Génie Militaire rahateo vao mainka ratsy noho ny kianja monisipalin’i Toamasina, ka atahorana ny hisian’ny faharatrana maro.
Kitra – tompon-dakan’i Madagasikara :: Hivoaka anio ny ampahan’ireo ekipa hiatrika ny fihodinana faharoa
Fisamborana :: Fiara iray voahodidina polisy teny Soanierana